Izibalo ze-YouTube Lapha | Martech Zone
I-Youtube Analytics ilapha
Lwesine, Disemba 1, 2011 NgoLwesithathu, Februwari 22, 2017 Douglas Karr
Uma ungakangeni ngemvume okwamanje, I-YouTube ivuselele imininingwane yayo package kokusha, okugcwele analytics iphakheji.
Nazi ezinye zezici zakamuva ku- Izibalo ze-Youtube:
Ikhasi elihle lokubuka konke.
Ukubika okujulile okubandakanya izibalo zokuzibandakanya njengoba kukalwa ngokuthandwa, ukungathandwa, ukuphawula nezintandokazi ezingeziwe noma ezisusiwe.
Amavidiyo aphezulu aqhuba ukubukwa nokubhaliselwe okuningi.
Umbiko omusha wokugcinwa kwezithameli okhombisa ukuthi amavidiyo akho ahlala kude kangakanani ngamavidiyo.
I-Youtube ikhiphe lokhu I-infographic ye-YouTube yezibalo ngencazelo yezinguquko:
Lapha eMartech, sibone ukwanda okuphawulekayo kwezimoto kumavidiyo ethu kanye nethrafikhi evela kumavidiyo ethu abuyela kusayithi lethu. Kungakho sithuthukise ifayili le- I-YouTube Sidebar Widget nathi nokwandisa amavidiyo ethu e-YouTube ukuze aseshwe.
Eqinisweni, sibona ukudonsa okuningi kuvidiyo ukuthi kungenzeka ukuthi sandisa okukhiphayo kumavidiyo masonto onke lapha maduzane kanye nomxhasi osemthethweni wevidiyo! Inkinga yethu ngamavidiyo ukuthi bebembalwa kakhulu futhi bekude kakhulu futhi bengahambelani kancane. Silangazelele ukuthuthukisa amavidiyo amaningi anokuqukethwe okuhle kaningi. Sizokugcina uthumele.
Lokhu okusha analytics Iphakethe lizosiza ukubethela phansi okuqukethwe okuqhuba ukubandakanyeka kakhulu nabafundi bethu!
Tags: Ama-AnalyticsAmavidiyo Wokumakethaanalytics videoyoutubeizibalo ze-youtubeizibalo zevidiyo ze-youtube
Amasu we-10 we-Facebook wabathengisi be-B2B
Ukubuka kwe-Insider ngekusasa le-Software Marketing kanye Nemisebenzi ye-imeyili